Gịnị bụ uru nke ịkwanyere egwuregwu flooring? -News-Topflor China ejedebeghị
Gịnị bụ uru nke ịkwanyere egwuregwu flooring?
Echiche:68 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2019-06-03 Mmalite: Saịtị
Gịnị bụ uru nke ịkwanyere egwuregwu flooring? Ọ kachasị gụnyere uru nke nchedo gburugburu ebe obibi, nkwụsi ike na-eyi, mkpuchi mkpuchi, ọkụ na mgbochi mmiri, na ezigbo mmetụta ụkwụ. A na-ejikarị ya eme ihe na mba ndị mepere emepe, mana n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ anaghị enwe nghọta zuru oke banyere ala egwuregwu PVC, m ga-ewebata ihe ọmụma dị mkpa banyere ala egwuregwu ebe a. Maka nkọwa nke ndị na-azụ ahịa na ndị enyi.
Sportslọ egwuregwu PVC nwere uru pụrụ iche dị egwu n'ihe banyere njigide ejiji. N'oge usoro mmepe, a ga-agbakwunye akwa mkpuchi ndị na-eguzogide TPU na akwa elu. Mgbakwunye nke mkpuchi ndị na-eguzogide TPU nwere ike belata akwa nke ala pvc, dịka dịka ikike nke mba Nyocha nke nzukọ ahụ na-egosi na ndụ ọrụ nke ụlọ egwuregwu egwuregwu Topflor PVC nke teknụzụ dị elu nwere ike iru karịa afọ iri, nke na TPU transperent iyi-eguzogide oyi akwa dị oké mkpa, nke na-eme ka nkezi na-eguzogide mgbochi nke Topflor PVC egwuregwu n'ala Ọnụ ọgụgụ ahụ ruru ihe karịrị 4000 mgbanwe, na-eyi na-eguzogide larịị bụ Ac4 larịị, nke nwere ike zuru oke na-azaghachi iji ojiji nke gburugburu ebe dị iche iche.
E jiri ya tụnyere ala ihe ndị ọzọ, ụlọ egwuregwu PVC bụ ihe nchekwa na oge dị mfe iji wụnye ala. Dịka ọmụmaatụ, ntinye na iwu nke Topflor PVC egwuregwu dị ọsọ ọsọ ma dịkwa mma, enweghị ngwa simenti, enweghị injinia obodo, ọnọdụ ala dị mma nwere ike jikọtara ya na gburugburu ebe obibi gburugburu ebe obibi pụrụ iche, enwere ike iji ya rụọ ọrụ na 24 awa, ma nwee ike ịbụ n'efu zukọtara, chekwaa Oge ịchekwa oge.
Ikwu na ihe ndị ọzọ na flooring ihe, ịkwa egwuregwu PVC bụ ka a ala na mma n'ala. Were Topflor PVC egwuregwu dị ka ihe atụ. Ọ nwere nro siri ike ma sie ike. Mgbanwe a dị mma na-eme ka ndị mmadụ nwee nnukwu ụkwụ. Ala. Tụkwasị na nke a, ụlọ egwuregwu Topflor PVC nwekwara àgwà nke ezigbo nrụpụta ọkụ, nkwụsị ọkụ ọkụ na obere ọnụọgụ ọkụ, nke na-eme ka ihu igwe ya dị elu na-adịkarị n'ime ahụ mmadụ. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ egwuregwu Topflor PVC na-adabere na "ergonomics" dị ka ihe ndabere, na-eji akụrụngwa sitere na France wee mepụta dịka teknụzụ kachasị elu n'ụwa.
Ngwaahịa ahụ nwere njirimara nke esemokwu nke esemokwu kwesịrị ekwesị yana ọnụọgụ mgbochi skid. A na-ahazi Topflor PVC egwuregwu a na-arụ ọrụ pụrụ iche na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-eguzogide ala, nke nwere ike ime ka ọbụ ụkwụ na-agbaso ala n'oge niile, ma nwee ike nzaghachi siri ike mgbe ọ na-egbochi skid, ma enwere ọ dịghị ebe na-agbanwe agbanwe.
Lọ ọrụ mmepụta ihe kwesịrị ịhọrọ ala PVC na nguzogide abrasion dị elu!